National Democratic Front - NDF (Burma): သူးမွဲကလိုးသဘောတူညီချက်
မြန်မာနိုင်ငံသည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံ မှီတင်းနေထိုင်သည့် တိုင်းပြည်ဖြစ်သည်။
ခေတ်သစ်မြန်မာ့သမိုင်းတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ ညှိနှိုင်း၍
ကို ရယူနိုင်ခဲ့သော်လည်း ဗိုလ်ချုပ်ကျဆုံးမှုနှင့်အတူ အမျိုးသားသွေးစည်းညီညွတ်ရေးသည်
စစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက်တွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ အဖိနှိပ်ခံခဲ့ရခြင်း၏ အကျိုးဆက်အဖြစ် အမျိုးသားသွေးစည်းညီညွတ်မှုပြိုကွဲလျက် တိုင်းပြည် ကြေပြုန်းပျက်သုဉ်းမည့် ဘေးအန္တရာယ်ကြီးကိုရင်ဆိုင်နေရသည့် အချိန်အခါဖြစ်ပေသည်။ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ ပြည်သူတို့၏ လက်ငင်းလိုအပ်ချက်ဖြစ်သော စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဖျက်သိမ်းရေး၊ ခေတ်မီတိုးတက်၍ သာယာဝပြောသောထာဝစဉ်ငြိမ်းချမ်းသာယာသည့် လူအဖွဲ့အစည်းတည်ဆောက်ရေးတို့ကို အမျိုးသားသွေးစည်းညီညွတ်မှု အင်အားဖြင့်သာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သို့ပါ၍ အမျိုးသားသွေးစည်းညီညွတ်မှု တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းသည် ယနေ့ကာလ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ ပြည်သူတို့
အတွက် အဓိကကျသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ခေါင်းဆောင်သော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့သည် တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားပြုပါတီများနှင့် ပူးတွဲလျက် ယင်း
တာဝန်ကို တက်ကြွစွာထမ်းဆောင်နေသည့်နည်းတူ အောက်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် အဖွဲ့အစည်း (၂၃) ဖွဲ့သည်လည်း ၁၉၉၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၁၂) ရက်နေ့မှ (၁၄) ရက်နေ့အထိ (၃) ရက်တိုင်တိုင် ကော်သူးလေပြည်နယ် သူးမွဲကလိုးတွင် အမျိုးသားသွေးစည်းညီညွတ်ရေးနှီးနှောဖလှယ်ပွဲကြီးကို အောင်မြင်စွာကျင်းပ၍ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များကို တညီတညွတ်တည်း သဘောတူဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။ ၎င်းသဘောတူညီဆုံးဖြတ်ချက်များမှာ -
၁။ ၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင်ချုပ်ဆိုသည့် ပင်လုံစာချုပ်နှင့် ယင်းစာချုပ်ဆိုင်ရာ ကတိက၀တ်များ၊ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်တွင်ထုတ်ပြန်သည့် ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်၊ ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင်ချုပ်ဆိုသည့် မာနယ်ပလောစာချုပ်၊ ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင်ပြုလုပ်သည့် မယ်သရောထ သဘောတူညီချက်များသည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၊ ပြည်သူများ၏ အခြေခံအကျိုးစီးပွားကို ကိုယ်စားပြုသည့် သမိုင်းဝင် သဘောတူညီချက်ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူသည်။
၂။ မြန်မာပြည်၏ လက်ရှိပဋိပက္ခသည် ဖိနှိပ်အုပ်စိုးသူ စစ်အာဏာရှင်အုပ်စုကတဖက်၊ အဖိနှိပ်ခံတိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံ ပြည်သူလူထုကြီးကတဖက် ဖြစ်ပွားနေသည့် ပဋိပက္ခဖြစ်ပြီး ယင်းပဋိပက္ခကြီးသည် တနေ့တခြား ပိုမိုပြင်းထန်လာနေသည့်အတွက် အဆုံးအဖြတ်ကာလတခုသို့ပင် ရောက်ရှိနေသည်ဟု တညီတညွတ်တည်း သုံးသပ်ကြသည်။
၃။ န၀တ/နအဖ စစ်အာဏာရှင် ကြီးစိုးမှုကြောင့် ယနေ့မြန်မာပြည်တွင် ဒီမိုကရေစီ ဆိတ်သုဉ်း
ခြင်းနှင့် အမျိုးသားအခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်နေရသည်။ ထို့ကြောင့် စစ်အာဏာရှင်
ကြီးစိုးမှုကို ဖျက်သိမ်းပစ်ရန်မှာ တိုင်းပြည်၏ အဓိကဘုံလုပ်ငန်းတာဝန်ဖြစ်သည်ဟု တညီ
၄။ န၀တ/နအဖ စစ်အာဏာရှင်ကြီးစိုးမှုတိုက်ဖျက်ရေးတွင် လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ အယူဝါဒ၊ လက်ဝဲ
လက်ယာ မခွဲခြားဘဲ ပါတီ၊ အဖွဲ့အစည်းများအားလုံး၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံး အနိမ့်ဆုံး ဖြစ်နိုင်
သည့်အဆင့်မှစတင်၍ လက်တွဲဆောင်ရွက်သွားကြရန် သဘောတူဆုံးဖြတ်သည်။
၅။ န၀တ/နအဖသည် အမျိုးသားညီလာခံကို ဦးစီးကျင်းပခွင့်မရှိပေ။ လက်ရှိပြုလုပ်နေသည့်
အမျိုးသားညီလာခံသည် အတုအယောင် အမျိုးသားညီလာခံဖြစ်၍ လုံးဝတရားမ၀င်ချေ။ ထို့
ကြောင့် ၎င်းအမျိုးသားညီလာခံအား လုံးဝအသိအမှတ်မပြုကြောင်း တညီတညွတ်တည်း
၆။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူများ၏ ဆန္ဒနှင့်အညီ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ကျင့်သုံးရန်တညီတညွတ်တည်း သဘောတူဆုံးဖြတ်သည်။
၇။ အမျိုးသားတန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့် အခွင့်အရေး အပြည့်အ၀ရရှိပြီး အမျိုးသားပြည်နယ်များ စုပေါင်းပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသည့် စစ်မှန်သော ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရန်သဘောတူဆုံးဖြတ်သည်။
၈။ ၁၉၉၀ ပြည့် ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နှင့် တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားပြုပါတီ (၄) ပါတီ၏ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးခေါ်ယူရန် တောင်းဆိုခြင်း၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ လွှတ်တော်ရေးရာ ကော်မတီများကို ဖွဲ့စည်းခြင်းများအားထောက်ခံကြောင်း သဘောတူဆုံးဖြတ်သည်။
၉။ ဤနှီးနှောဖလှယ်ပွဲမှ သုံးပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုပေါ်ပေါက်ရေးကို လတ်တလောလုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ် ပူးပေါင်းကြိုးပမ်းသွားကြရန် သဘောတူဆုံးဖြတ်သည်။
၁၀။ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂနှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများမှမြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီထွန်းကားရေး နှင့်ငြိမ်းချမ်းမှုဖြစ်ထွန်းစေရေးအတွက် တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်လာမှုများအပေါ် ကြိုဆို ထောက်ခံသည်။ ၁၉၉၈ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ၏ မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များသည် တည့်မတ်မှန်ကန်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များဖြစ်၍ တာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့် လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ရန် တညီတညွတ်တည်း တောင်းဆိုသည်။
၁၁။ မြန်မာပြည်အတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု၊ ရောင်းဝယ်မှု ပြည်ပတင်ပို့မှုများတွင်နအဖစစ်အုပ်စု၏ အဓိကပါဝင်ပတ်သက်နေမှုကို ဆန့်ကျင်ရှုတ်ချကြောင်း သဘောတူဆုံးဖြတ်သည်။
၁၂။ နအဖစစ်အာဏာရှင် ကြီးစိုးမှုရှိနေသည့်ကာလအတွင်း မြန်မာပြည်အတွင်းသို့ မည်သည့်ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုမှန်သမျှ ပြည်ပမှ ၀င်ရောက်မပြုလုပ်ရန် တောင်းဆိုကြောင်း သဘောတူဆုံးဖြတ်သည်။
၁၃။ ဤအမျိုးသားသွေးစည်းညီညွတ်ရေး နှီးနှောဖလှယ်ပွဲမှ ဆုံးဖြတ်ထားသည့် သဘောတူ
ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် နှီးနှောဖလှယ်ပွဲသို့တက်ရောက်ကြသည့် အဖွဲ့အားလုံး တာဝန်ယူရန်၊ စည်းရုံးညှိနှိုင်းရေး ကော်မတီတရပ်ဖွဲ့စည်း၍ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်သွားရန် ဆုံးဖြတ်သည်။
၁၉၉၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၄) ရက်။
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ရဟန်းပျိုသမဂ္ဂ ABYMU
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (လွတ်မြောက်နယ်မြေ) NLD-LA
Asaconsequence of long years of oppression under the military dictatorship, the national solidarity is inavulnerable state of total disintegration. The immediate need of the people of all the nationalities, being the abolition of the military dictatorship and the building ofamodern society with lasting peace and prosperity, could be achieved only throughaconsolidated national strength. Thus, the building of national solidarity is the main task of the people of all the nationalities, today. Just as the National League for Democracy (NLD), led by Daw Aung San Suu Kyi, and the political parties representing the nationalities, jointly and actively have been undertaking the said task, we, the 23 organizations, whose signatures appeared below, successfully held the “Seminar on National Solidarity,” from the 12th to 14th of December, 1998, at Thoo Mweh Klo, Kawthoolei State, and unanimously reached the agreement given below.
1. The Seminar recognized that the 1947 Panglong Agreement and pledges contained in the Agreement, the 1990 Bo Aung Kyaw Street Declaration, the 1992 Marnerplaw Agreement and the 1997 Mae Tha Raw Hta Agreement are the historic agreements representing the fundamental interest of the ethnic nationalities and the people.
2. The Seminar unanimously determined that the conflict prevailing in Burma isaconflict between the oppressive military dictatorship, on the one side, and the oppressed people of all the nationalities on the other, and as it has been intensifying, day by day, it is now approachingadecisive stage.
3. Asaresult of domination of the SLORC/SPDC military dictatorship, there was lack of democratic rights and loss of the rights of the nationalities, in present day Burma. Therefore, it was unanimously decided that the abolishment of the military dictatorship was the principal and common task of the country.
4. It was decided that all political parties, organizations and individuals, irrespective of race, religion and political ideology, were to join hands and work together, starting from the lowest possible stage, in the struggling for the abolition of the SLORC/SPDC military dictatorship.
5. The SLORC/SPDC has no right to lead in organizing and convening the National Convention. Therefore, the Seminar unanimously decided that the National Convention of the SPDC could absolutely not be accepted.
6. The Seminar unanimously decided to promote and practice the multi-party democratic system, in accordance with aspiration of the entire people of all the Nationalities.
7. The Seminar unanimously decided to establishagenuine federal union, composed of national states, having national equality and full right of self-determination.
8. The Seminar decided to support the demand for the convening of parliament, formation of the Committee Representing People’s Parliament and the Parliamentary Affairs Committees by the victorious parties in the 1990 election, the National League for Democracy (NLD) and the4political parties representing the ethnic nationalities.
9. This Seminar decided to cooperate in the struggle for the emergence of tripartite dialogue, as an immediate task.
10. The Seminar welcomed and supported the active involvement of the United Nations and the international organizations for the establishment of peace and democracy in Burma. Since the 1998 UNGA Resolutions on Burma were correct, the Seminar unanimously demanded that they be implemented, in practice, by the responsible authorities.
11. The Seminar strongly condemned the involvement of the SPDC military dictatorship, asaprincipal partner, in the cultivation, by the responsible authorities.
12. The Seminar called upon foreign investors not to invest in Burma, so long as the SPDC military dictatorship was in power.
13. The Seminar decided that all the organizations attending the Seminar were to take the responsibility for the maintenance and implementation of the decisions and to formaCoordinating and Organizing Committee in order to continue for the implementation the decisions.
1. U Tin Maung thet
2. U Myo Win
3. U Myat Thu
All Burma Students’ League (ABSL)
4. Ashin Kaymar Sara
All Burma Young Monk’s Union (ABYMU)
5. U Tha Noe
6. Khaing Myo Min
7. S’lai Shwe Khar
Secretary, Foreign Affair Department
8. S’lai Tha Nei Luai
9. Saw Jacob
10. U Zaw Naing Oo
11. Saw Shwe Hser
12. B. Kyah Oo
13. U Soe Lwin
Myeik-Dewai United Front (MDUF)
14. U Kyaw Hla
Muslim Liberation Organization (MLO)
15. U Deniel Aung
16. U Than Htut
National League for Democracy-Liberated Area (NLD-LA)
17. U Kyaw Htet
People Defense Force (PDF)
18. U Aye Saung
People’s Liberation Front (PLF)
19. Khun Okker
Pa-O People’s Liberation Organization (PPLO)
20. U Aung Myint
People’s Patriotic Party (PPP)
21. Mai Aik Pong
22. Khun Kyar Nu
Shan Democratic Union (SDU)
23. Maha San
24. U Maung Maung Latt
Posted by National Democratic Front - NDF at 1:26 PM